कोरोना भाइरस त्रास : घरमा के गर्दै छन् खेलाडी ?
२०७६ चैत १५ शनिबार ०८:५१:००
अहिले विश्व नै कोरोना भाइरसको त्रासमा छ । धेरैको दैनिकी घरभित्रै कैद भएको छ । अन्य क्षेत्रजस्तै कोभिड–१९ का कारण खेलकुदका गतिविधि पनि ठप्प छन् । पछिल्लो चार दिनदेखि देश नै ‘लकडाउन’मा छ । नेपालमा खेलकुदका गतिविधि त्यसअघिबाटै रोकिएका थिए । यसले गर्दा नियमित अभ्यास गर्नुपर्ने खेलाडी पनि घरमै सीमित हुनुपरेको अवस्था छ । राम्रो नतिजाका लागि नियमित अभ्यास गर्दै शारीरिक रूपमा आफूलाई चुस्त राख्नुपर्ने खेलाडीले भाइरस संक्रमणको त्रासले सामान्य अभ्याससमेत गर्न पाएका छैनन् । त्यसका बाबजुद खेलाडीले आफूलाई ‘फिट’ राख्न के प्रयास गरिरहेका होलान् ? नयाँ पत्रिकाकर्मी प्रकाश कँडेलले जान्ने प्रयास गरेका छन् ।
‘खानपानमा ध्यान दिइरहेको छु’ : ज्ञानेन्द्र मल्ल कप्तान, नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली
यो सोचेभन्दा बाहिरको परिस्थिति हो । अहिले बाहिर निस्कन पाइएको छैन । यस्तोमा अभ्यास गर्ने त कुरै भएन । घरको काममै अलि व्यस्त भइरहेको छु । घरको काममा व्यस्त गराउनु पनि आफूलाई एक्टिभ गराउने उपाय हो । घरमा गर्न सकिने एक्सरसाइज गरेर भए पनि अहिलेको अवस्थालाई मेन्टेन गर्ने प्रयास गरिरहेको छु । आफूलाई फिट राख्न केही न केही त गरिरहनुपर्छ । साथै, खानपानमा पनि ध्यान दिइरहेको छु । अहिले आफैं संयमित भएर परिवारलाई पनि सम्हाल्नुपर्ने अवस्था छ । भाइरसका कारणले सबैतिर त्रासदीपूर्ण अवस्था छ । धेरै कुरा अहिले हाम्रो नियन्त्रणमा छैन । त्यसैले सबैलाई सुरक्षित रहेर आफूलाई मेन्टेन गर्न आग्रह गर्दछु ।
‘फिट रहन घरको काममा बढी जोड’ : सावित्रा भण्डारी
स्ट्राइकर (राष्ट्रिय महिला फुटबल टिम)
अहिले घरमै सामान्य वर्कआउट गरिरहेकी छु । विशेष परिस्थितिमा सरकारले हामी सबैको हितलाई ध्यानमा राखेर लकडाउनको निर्णय गरेको छ । यो निर्णयलाई पालना गर्नु आवश्यक छ । खेलाडीका लागि यो समयमा आफ्नो शारीरिक तन्दुरुस्ती कायम गर्न चुनौतीपूर्ण हुने गर्छ । फिटनेसमा ध्यान नदिने हो भने घरमा बसेको छोटो समयमै सामान्य मानिससरह हुने गर्दछ । त्यसैले विशेषगरी खेलाडीले घरमै रहँदा पनि आफ्नो शारीरिक तन्दुरुस्तीका लागि सम्भव भएसम्म सबै प्रयास गर्न जरुरी छ । मेरो हकमा शारीरिक तन्दुरुस्तीका लागि घरका काममा आफूलाई व्यस्त राख्ने गरेकी छु । घरमा रहँदा पानीको जार, ग्यास सिलिन्डरलगायत घरायसी सामग्रीबाट पनि अभ्यासलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ । मुख्य कुरा स्वास्थ्य हो, स्वास्थ्यप्रति सचेत भएर अघि बढ्न जरुरी छ । सबैलाई सुरक्षित भएर आफ्नो ख्याल राख्न आग्रह गर्छु ।
‘भर्‍याङमा दौडिन्छु’ : प्रिन्स दाहाल
यो सबैका लागि चुनौतीपूर्ण समय हो । आफू घरभित्रै रहेर जोगिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसपछि मात्रै आफ्नो शरीर मेन्टेन गर्नेबारे सोच्नुपरेको छ । सबैको जस्तो मेरो पनि दैनिकी घरभित्रै बित्ने गरेको छ । यसमा आफूलाई शारीरिक रूपमा चुस्त राख्न घरभित्रै मिलेसम्मको अभ्यास गर्ने गरेको छु । म विशेष गरेर भर्‍याङमा दौडिन्छु । घरका काममा पनि आफूलाई व्यस्त बनाउने प्रयास गरेको छु ।
स्वाभाविक रूपमा एक खेलाडीका लागि घरमै शारीरिक तन्दुरुस्ती कायम गर्न मुस्किल हुने गर्छ । घरको सानो एरियामा धेरै अभ्यास गर्ने सुविधा हुँदैन । तर, यो अवस्थामा घरभित्रै र सानो ठाउँमा पनि गर्न मिल्नेसम्मको सबै प्रयास गर्नुपर्दछ । जिमका केही सामान छन् भने तिनीहरूमार्फत पनि अभ्यास गर्न सक्छौँ । अवस्था सहज भएको भए हामी यो समय प्रशिक्षणमा हुन्थ्यौँ । दक्षिण कोरियाबाट प्रशिक्षक आउनुभएको छ । यद्यपि, त्यसलाई पछि निरन्तरता दिनेछौँ । अहिलेलाई घरमै सुरक्षित बस्ने र आफूलाई कसरी स्वस्थ र तन्दुरुस्त राख्ने भन्ने नै मुख्य चुनौती भएको छ ।
‘तौल बढ्न नदिने प्रयासमा छु’ : किरण चेम्जोङ
गोलरक्षक, राष्ट्रिय फुटबल टोली
घर फर्किएको चार दिन मात्रै भएको छ । त्यस वेलादेखि नै घरभित्र छु । यस्तो अवस्थामा खेलाडीका लागि मुख्य चुनौती भनेको डाइट मेन्टेन गर्नु हो । म आफैँले भने खानामा विशेष ध्यान दिने गरेको छु । त्यसैले यो अवधिका लागि कार्यतालिकै बनाएर खानाको ब्यालेन्स गर्ने प्रयास गरिरहेको छु । त्यसका साथै घरभित्रै नियमित एक्सरसाइज गरिरहेको छु । बाहिरजस्तो एक्टिभ हुने अवस्था नै हुँदैन किनकि त्यसका लागि स्पेस उपलब्ध छैन । अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको नै शरीर मेन्टेन गर्नु हो । बडी मेन्टेन गर्न सकियो भने फिटनेसको चिन्ता हुँदैन । त्यसैले शरीरमा ‘फ्याट’ र तौल बढ्न नदिने प्रयास गरिरहेको हुन्छुु । घरमा योभन्दा बढी गर्न सकिन्न । अन्य फिटनेसका लागि घरबाहिरै जानुपर्छ । त्यसका लागि दौड र साइक्लिङ गर्नैपर्छ । धेरै समयपछि परिवारलाई समय दिन पाउँदा खेलाडीलाई मानसिक रूपमा फाइदै हुन्छ । कोरोना भाइरसको त्रास त छँदै छ । यद्यपि, त्यसले परिवारसँग समय बिताउने अवसर पनि दिएको छ । सबैलाई घरमै सुरक्षित रहेर आफ्नो बडी मेन्टन गर्न अनुरोध गर्दछु ।
संविधान संशोधनसम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक प्रक्रियामा जान सक्छ